CANAB PANTHER BLACK: SHARAXAADDA KALA DUWAN IYO SAWIRRADEEDA, GAAR AHAAN BEERASHADA - BEERTA
Vitamin canab "Black Panther": sharaxaadda kala duwan iyo sawirkiisa
Kala duwanaanta canabka Black Panther wanaagsan iska caabida cudurada kala duwan.
Waxay leedahay dhalid wanaagsan. Iyadoo aan qabin xaalado xilliyeed.
Waxay ku koraan meelaha carrada madow ee heerarka kala duwan.
Panther Black waxaa loola jeedaa canab miiska. Nuqul ka mid ah foomkan soosaaridda waa suurad wacan si loo soo saaro korriin khibrad leh. Gaar ah Madow Panther waxaa loo soo gaabiyey magaca maadada mugdi madow, oo ku dhow miro miro leh oo leh maadada sare ee pectin.
Noocyada madow waxaa sidoo kale ka mid ah Moldova, Fircoon iyo Sangiovese.
Fasalkan waxaa ku jira xaddi badan oo sonkor ah. Sidaa daraadeed, maaddada kalooriga, Black Panther waxaa loogu yeeraa badeecad aan faa'iido lahayn, oo gacan ka geysanaysa buuxinta baahida iyo gaajada.
Kala duwanaanta kalooriga waa 64 kiiloomitir halkii boqol ee badeecada ah, karbohydrate-ka wuxuu hoos u dhacaa 17 gram.
Canabku si guul leh ayuu u kici karaa rabitaanka cuntada oo raad ku yeesha nidaamka miisaanka.
Canab Panther: sharaxaad kala duwan
Marka koraan canab of kala duwan "Black Panther" uma baahna xeerka qasabka ah. Waxay haysaa dhirta firfircoon iyo cirridka aadka u fiican ee caleemaha.
Valentines, White Wonder iyo Gift of Magarach waxay sidoo kale ku kala duwan yihiin koritaankooda.
Muuqaalka muuqaalka kala duwan ee noocyada kala duwan ee loo yaqaan 'inflorescences' ee tallaabooyinka I, II, III, oo keeni kara dhibaatooyin. Inflorescences aad bay u furan yihiin, iyagoo gaaraya 47 sentimitir. Ubax ee labada jinsiyo leh pollination fiican.
Kala duwan ma u baahan tahay horgeyn hore, iyo sidoo kale pollination dheeraad ah. Inta lagu jiro ubax, waxay soo saari kartaa inflorescences waaweyn, ee xaddiga 3-4 xabbadood oo biqil.
Tani waxay muujinaysaa dhalid heer sare ah. Rucubaha Black Panther dhexdhexaad ah dhexdhexaad ah, oo ah cabbir weyn, konik, aad u ballaaran. Miisaankoodu wuxuu gaaraa 0.7-1.2 kiilo garaam, marmarka qaarkood wax ka badan hal iyo kiilo badh.
Wax-soo-saarka ugu wanaagsan waxaa muujiya noocyo sida
Miro waaweyn, qaabka caadiga ah ee qashinka ah 25x35-40 millimitir. Iyada oo miisaanka - 12-15 garaam.
Berry waa mugdi madow ee midabka, madow marka si buuxda u bislaaday. Miraha leh cunto fiican, laakiin maqaarka cufan. Dhadhanka ayaa udhexeeya caraf udgoonaanta. Jidhku waa fareem iyo casiir leh. Carafku wuxuu isku mid noqon karaa noocyada kala duwan ee Moldova.
Gaadiidka iyo kaydinta berry ee heerka ugu sareeya.
Kala duwanaanshuhu waa ku habboon yahay dukaamada iyo tukaamada.
Si cad oo cad oo canab ah "Panther Black" waxay ku jiri kartaa sawirka hoose:
Panther madther waa iskudhaf adag oo isku dhafan, ka gudbaya dhowr nooc oo canab ah markaad ka gudubto. Foomka waxaa la helay thanks to noocyada AIA 1 (Delicious Red) x Nadezhda Azos + Valek, Richelieu + Kuban.
Foomka isku dhafan waxaa la soo saaray sanadkii 2005 oo uu sameeyay tarbuunka qaran N.P. Vishnevetsky.
Gooynta iibinta waa tayo sare leh, waxay si fiican u qaadaan xaalad wanaagsan. Miyuu jecel yahay qoyaan xad dhaaf ah, laakiin si fiican u roobka oo aan midabtakoorin.
Waxaa lagu kori karaa sidii daboolid, iyo sida aan daboolin. Waxay u baahan tahay qoryo badan. Kala duwan ayaa si fiican u koraa dhulka Ukraine iyo qaybta koonfureed ee Ruushka.
Waxaa lagu kori karaa gobolka Krasnodar, Rostov iyo Voronezh. On territory of Ukraine - ee Zaporizhia, Odessa, gobollada Kherson. Sidoo kale, dhirta kala duwan ee Black Panther ayaa inta badan laga helaa jasiiradda Crimean.
Caawin Dadka Ukraaniga ah Breeder Vishnevetsky ayaa ku lug lahaa viticulture muddo ka badan 30 sano. Sanadihii la soo dhaafay, wuxuu tijaabiyey habka noocyada isdhexgalka foomamka hybrid ee canab.
Sababtoo ah xaaladaha cimilada ee aagga, tarbiyadu ma heli karto noocyo ku haboon. Sidaa daraadeed, mahadsanid shaqo iyo karti badan, Nikolai Pavlovich qudhiisa ayaa keeney labaatan foom oo canab ah. Wuxuu u hambalyeeyay dhammaan noocyada beeraha ee qoyskiisa.
Ujeedadiisuna waxay ahayd in la abuuro noocyo tayo sare leh, noocyo badan oo wax taraya oo ah taranta oo soconaya mudo dheer, dhadhan sare iyo midab kala duwan. Baadhitaanada Vishnevetsky waxay ku gudubtaa dhulka 37 acres. Of dhammaan gooyn la beeray, in ka yar 1% ka mid ah kuwa ka badbaaday weli ku sugnaa.
Markaad soo degto, curyaamiyuhu waa in uusan aheyn in ka badan 3 mitir. Foomka hybrid ee Pan Panther waxay meel ku haboon tahay ururinta qashinka khibrad leh.
Ka mid ah Beelaha si fiican loo yaqaan iyo caan waa in sidoo kale fiiro gaar ah u leh Kinglet, Gordey iyo Rumba.
Gaariga madow wuxuu si fiican ugu adkeeyaa barafka. Waxay bixisaa iska caabin buuxa oo ka baxda ilaa 24 darajo Celsius.
Rkatsitli, Rusven iyo Krasa ee waqooyiga ayaa sidoo kale leh caabuq aad u sareeya.
Uma baahna duurka hoyga khasabka ah ee xilliga jiilaalka. Panther Black waa noocyo hore, oo leh qaan gaar ah 110-115 maalmood. Dhirta Wakhtiga Buuxa ee buuxa wuxuu socon karaa illaa 125 maalmood.
Wuxuu gaarsiiyaa qandaraas buuxa illaa Agoosto 15-25.
Fruiting waa mid aad u xoog badan, ilaa 20 kilo oo ka mid ah baadiyaha.
Abaalmarinta Magarach, Xilligii Kherson Caawa iyo Isabel waxay ku faani karaan wax-soosaarkooda sare.
Beergooyska duurka ayaa la ilaaliyaa muddo dheer. Maaddaama dhadhanka laysku qurxiyo iyo saxarka casiir leh, noocyada kala duwan waxaa loo isticmaalaa in laga dhigo casiir, marmalades, saladh miro ah, xayawaan, saxarado, jellies. Sababtoo ah content sare ee pectin, casiir, cadaadiyey laga soo jaray canab, Ceelasha aad u wanaagsan. Cunto jelly laga bilaabo miro ay sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa marka daadinta keega.
Kala duwan ayaa ka sarreeya celceliska cudurada kala duwan ee canab. Wixii fungal 3-3.5 dhibcood, ee xagta oo heerka heerka 3 dhibcood, oidium ah 3.5 dhibcood. Caleenta cagaarka ah lama shaacin.
Kala duwan ayaa u adkaysata anthracnose iyo bakteeriyada. Thanks to maqaarka qaro weyn oo aan saameyneynin hadiis.
Ka dib roobab culus, godad madow ma jabin. Daaweynta ka hortagga cudurrada looma baahna.
Laakiin ka hortagga cayayaanka waa in la sameeyaa ugu yaraan hal mar xilli. Gaariga madow waxaa lagu jabin karaa aboor laba sano jir ah, caleemaha canabka, lafdhabarta, cirridka iyo shoolada.
Qiyaasta halganka waa qiimo soo saarid dhirta iyo iyadoo la raacayo 25% hexachlorane.
Pollination waxaa si fiican loo qabtaa xilliga dayrta. Budada ayaa lagu kala firdhiyaa dusha dhulka, kadibna waxaa la qabtaa ilaa 25 sentimitir qoto dheer. Guryaha chernozem ee gobolka Voronezh iyo Krasnodar Territory, heerka isticmaalka waa 1.0-1.5 kiiloogitir halkii mitir labajibbaaran.
Kala duwanaanta Black Panther waa mid ka mid ah noocyada ugu wanaagsan ee koray ee gobollada koonfurta ee Russia ee sifooyinka dhadhan sare.
Isticmaalkeeda ayaa si ballaaran loo horumariyay. in lagu sameeyo casiirada guriga, jelly iyo cuntooyinka kale. Caan ka mid ah chefs of suxuunta qalaad.
Canabku waa ay jecel yihiin dadka waaweyn iyo carruurta labadaba, sababtoo ah dhadhanka wanaagsan ee berry ah. Waxay ka kooban tahay sifooyin badan oo bogsiin leh: pectin, fiitamiin A, C, B, D iyo xubno raad.